गाँजा काण्डमा प्रहरी शंकाको घेरामै, कलवार दाजुभाईकै कुरा मिल्दैन
पर्सा प्रहरीले गएको सोमबार बिश्रामपुरको एक घरमा छापामारी ग¥यो । प्रहरी प्रबक्ता राजन लिम्बुको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ९ विश्रामपुरको जंगबहादुर प्रसाद कलवारको घरमा छापामारी गरेको थियो ।
सोमबार कसरी छापामारी ग¥यो ?
प्रहरी श्रोतका अनुसार लाँगूऔषध गाँजा रहेको भनी पाइएको सुचनाको आधारमा प्रहरीले छापामारी गरेको थियो । प्रहरीले आफ्नो मिसन सफल बनाउँनको लागि सुरुमा २–३ जना सादा पोसाकका प्रहरीलाई गाँजाको कारोबारी बनाएर जंगबहादुर प्रसाद कलवारको घरमा ग्राहकको रुपमा पठाएको श्रोतको भनाई छ ।
उनीहरुको टोलीले केही गाँजा आफूहरुलाई चाहिएको भन्दै सुरुमा गम्भिरा कलवारसंग केही गाँजा खरिद ग¥यो । त्यसपछि थप परिमाणमा अझै आफूहरुलाई गाँजा चाहियो भनेर प्रेम र शर्मा कलवारसंग खरिद गरी छापामारी गरेको टोलीमा सहभागी एकजना प्रहरीको भनाई छ । उनका अनुसार– ‘प्रहरीले तीनै दाजूभाईसंग गाँजा खरिद गरीसकेपछि उनीहरुको छुट्टाछुट्टै रहेको घरमा छापामारी करीब ४८ किलोग्राम गाँजा बरामद गरेको थियो ।
’तीनै जनाको घरबाट गाँजा बरामद भइसकेपछि डिएसपी साहेबको निर्देशन अनुसार शुरुमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । तर तीन जनालाई मात्र जिल्ला प्रहरीमा ल्याइएको नाम नलेख्ने सर्तमा उनले बताए ।
प्रहरीले पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई जनालाई मात्र सार्वजनीक गरेको थियो । उनी भन्छन्– ‘यदि त्यो दोषी नभएको भए उनीसंगै समातिएका ६ जनामध्ये अनुसन्धान गरी ३ जनालाई मात्र किन जिल्ला ल्याइयो ? गाँजासहित पक्राउ गरेकै कारणले उनीहरुलाई ल्याइएको हो । तर,खै के कारणले प्रेमले उन्मुक्ति पाए थाँहा भएन ।’उनले दोहो¥याउँदै भने यदि त्यो निर्दोष भएकोभए त्यही दिन छाँडिएका अन्य ३ जनासंगै उनी किन छाडिएनन् भन्ने तथ्यले नै पुष्टि गर्छ नि ?।
प्रेमलाई जोगाउन किन उत्रियो प्रहरी ?
प्रहरीले आर्थिक नजराना लिएको भन्दै बीरगंजका स्थानीय सञ्चारम माध्यमहरुमा समाचार आयो । तर त्यसको चार दिनपछि खण्डन स्वरुप पर्सा प्रहरीले एक पत्रकार सम्मेलन गरी घटना बारे जानकारी गरायो । पत्रकार सम्मेलनमा शर्मा कलवारले आफूले त्यो गाँजा अन्जान ब्यक्तिसंग बाटोमा २० हजारमा खरिद गरेको बताए । उनले त्यो गाँजा ८० हजारमा बेच्नलाई किनेको भनेका थिए ।
तर प्रहरी कार्यालयको अर्को कोठामा त्यसको २ मिनेट बित्न नपाउदै प्रेम कलवारसंग साक्षत्कार गरिरहेका पत्रकारलाई कलवारले फरक कुरा बताए । कलवारले प्रहरीले बरामद गरेको ४८ किलो गाँजा आफनै खेतमा पाँच वर्ष अगाडि उत्पादन गरि भण्डारण गरेर राखेको बताएका थिए ।
उनीहरुको भनाईमा एकरुपता नदेखिएपनि आर्थिक चलखेलका कारण मुख्य कारोबारी प्रेम कलवार छाँडिएको प्रहरी श्रोतको दावीमा दम रहेको छ । करीब ७ लाख रुपैयाको लेनदेन पछि प्रेम कलवारलाई अनुसन्धान बिना नै छाँडिएको प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनलाई त्यही वडाको वडा अध्यक्षमार्फत छाडिएको हो ।